Ungayikopa njani kwaye uyincamathisele kwi-Mac, sixelela zonke iinketho ezikhoyo | Iindaba zeGajethi
Ngokuqinisekileyo sonke sicinga ukuba kulula njengokucinezela izitshixo ezimbalwa kunye ne-voila, ke ayinangqondo ukubona ezinye iindlela ezikhoyo zokukopa kunye nokuncamathisela kwi-Mac. sithatha inyathelo elinye kulo msebenzi kwaye ngokuqinisekileyo Uninzi lwabasebenzisi lusuka kwiWindows okanye ezinye iinkqubo ezisebenzayo ziye kwiMacOS Kulungile kubo ukuba bazi iindlela ekufuneka sizikope kwaye sizincamathisele.
Singatsho nokuba kwiiMacs zangoku ngenxa yeenguqulelo ezintsha zeMacOS sinokukhetha khuphela kwaye uncamathisele isicatshulwa, umfanekiso kunye nevidiyo kwi-iPhone yethu, iPod Touch okanye kwi-iPad ngokulula nangokukhawuleza kwi-Mac. Yonke le nto siza kuyibona namhlanje.
Kodwa masihambe ngokwamacandelo kwaye masiqale ngeyona nto ilula kumntu wonke, eyokukopa kunye nokuncamathisela kwi-Mac.Kucacile ukuba oku kwenziwa ngezitshixo ezifanayo nezo zeWindows kodwa yinto eyahlukileyo ke makhe sibone kuqala Zeziphi izitshixo ekufuneka sizisebenzisile ukwenza esi senzo kwi-macOS.
1 Khuphela kwaye uncamathisele umyalelo kwi-macOS
2 Qwalasela yonke ibhodi eqhotyoshwayo
3 Uyisebenzisa kanjani le clipboard kwiMac
4 Yeyiphi usetyenziso esinokuyisebenzisa kwi-macOS ukwenza lo msebenzi
Khuphela kwaye uncamathisele umyalelo kwi-macOS
Ukuze sisebenzise lo msebenzi ukhawulezileyo kufuneka sicinezele cmd ekwabizwa ngokuba sisitshixo Umyalelo kunye nonobumba C (ikopi). Ngale nto sele sinesicatshulwa okanye ezo sifuna ukuzikopa kwibhodi eqhotyoshwayo kwaye emva koko siza kuyincamathisela kulo naluphi na uxwebhu, ifayile okanye okufanayo, ezinokuba ngokucinezela isitshixo esinye Umyalelo (cmd) kunye noonobumba V (uncamathisele). Iibhodi ezitshixwayo zeMac kunye neemenyu zihlala zisebenzisa iisimboli zezitshixo ezithile, kubandakanya nezitshintshi eziguqula:
Ezi mpawu ukusuka ekhohlo ukuya ekunene zezi: Umyalelo (okanye iCmd), iShift, uKhetho (okanye iAlt), uLawulo (okanye iCtrl), oonobumba abakhulu kunye noFn. Xa uthenga iMac ezi zitshixo kufuneka zikwimemori yakho kwasekuqaleni ukuze ungalahli iinkcukacha zemisebenzi okanye izinto ezinje. Njengoko ubona, olu lutshintsho kwiimpawu zezinye esinazo kwenye i-OS kwaye ezinye zezona ziphambili kwinkqubo efana ne-cmd, esiza kuyisebenzisa kakhulu kwi-Mac yethu.
Qwalasela yonke ibhodi eqhotyoshwayo
Kule meko, into enokwenziwa yiMac yethu ngezixhobo zeMacOS kunye neApple nge-iOS kukukopa kwaye uncamathisele naphi na nakuphi na okubhaliweyo, umfanekiso, ividiyo okanye omnye umxholo ngendlela elula nekhawulezayo eya kwi-Mac yethu, kuba le nto sinayo ukuqwalasela ibhodi eqhotyoshwayo. Kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuba ukusebenzisa lo msebenzi kufuneka sisebenzise i-ID efanayo ye-Apple ngeseshoni esebenzayo kwi-iCloud, kufuneka sikhumbule ukuba kukho ubuncinci beemfuno ukuze ukwazi ukusebenzisa olu khetho kumaqela ethu.
Izixhobo ezihambelanayo kwi-iOS 10 kwaye kamva:
I-iPhone 5 okanye kamva
I-iPad (isizukulwana sesi-4) okanye iinguqulelo zamva
I-iPad Air okanye kamva
I-iPad mini 2 okanye kamva
I-iPod touch (isizukulwana sesi-6) okanye kamva
IMac iyahambelana neMacOS Sierra okanye kamva:
IMacBook (Ekuqaleni kuka-2015 okanye kamva)
IMacBook Pro (2012 okanye kamva)
IMacBook Air (2012 okanye kamva)
Mac mini (2012 okanye kamva)
iMac (2012 okanye kamva)
I-Universal Clipboard inokukopa iifayile ezipheleleyo ukusuka kwi-Mac enye iye kwenye ngaphandle kwengxaki ke ngale ndlela asinangxaki zokuhambelana nangona zifuna uneMacOS ePhakamileyo yeSierra okanye iinguqulelo zamva nje ezifakiwe kuzo zombini iiMacs.
Useto esiludingayo ukuze lusebenze lusisiseko kwaye ifuna iBluetooth ukuba yenziwe, ukuba zonke izixhobo zisebenzele uqhagamshelo lweWi-Fi kwaye ngokucacileyo ukuba zonke izixhobo zenziwe ngesandla okwenziwa apha:
IMac: Khetha imenyu yeApple (iapile ephezulu)> Ukukhethwa kweNkqubo kwaye ucofe Ngokubanzi. Sikhetha "Vumela i-Handoff phakathi kwale Mac kunye nezixhobo zakho ze-iCloud"
Kwi-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch: yiya kuseto> Ngokubanzi> Isandla kunye nokwenza kusebenze i-Handoff
Kwaye voila, singasebenzisa olu khetho
Ngoku singasebenzisa olu khetho khuphela kwaye uncamathisele kuso nasiphi na isixhobo seApple oko ngokuqinisekileyo kuyahambelana nalo msebenzi uqaliswe yinkampani yeCupertino kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Uyisebenzisa kanjani le clipboard kwiMac
Ewe, kulula kakhulu ukuyisebenzisa kuba kubandakanya ukulandela amanyathelo afanayo esiwenzileyo ukukopa kunye nokuncamathisela nakweyiphi na iMac, kuphela kule meko siya kuba nakho ukuhambisa ulwazi ukusuka kwesinye isixhobo ukuya kwesinye. Into yokuqala ukuyazi loo nto akuyomfuneko ukuba namaqela omabini asebenzayoOko kukuthi, isikrini sisebenza ukukopa isicatshulwa, iifayile ezipheleleyo, iifoto, iividiyo okanye nantoni na esiyifunayo. Oko sikukopa kwibhodi eqhotyoshwayo kuya kuhlala kusebenza okwexeshana okanye ude ukope omnye umxholo kwesinye sezixhobo.
Nje ukuba sikope kufuneka sincamathisele endaweni esifuna ukuyifumana kunye ne-voila, akufuneki silandele nawaphi na amanyathelo okanye senze nantoni na engaqhelekanga ngaphandle kwentshukumo efanayo esiyenzayo kwikhompyuter nganye. Umzekelo Sikopa isicatshulwa kwiNkqubo yamanqaku nge-cmd + c kwaye emva koko sivule i-iPhone kwaye siyincamathisele kuWhatsApp ngokunqakraza kumphezulu wencoko yababini kunye nokuncamathelisa. Elula njengaleyo.
Yeyiphi usetyenziso esinokuyisebenzisa kwi-macOS ukwenza lo msebenzi
Ngokwenyani, akukho mfuneko yokusebenzisa nasiphi na isicelo ukwenza lo msebenzi wokukopa kunye nokuncamathisela kwi-Mac yethu, kwaye ngokufika kwebhodi eqhotyoshwayo jikelele kunye nomsebenzi "wokuqhubeka", kulula kakhulu kwaye kugqityiwe ukwenza ezi ntshukumo kwi IMacOS. Kungenxa yoko le nto ukusebenzisa ii -apps ukwenza lo msebenzi kungoku nje kungaphambili, kodwa ukuba kukho isicelo ekufuneka sisisebenzisile nangasiphi na isizathu sokwenza le nyathelo. oku Cola 2.
Cola 2 usetyenziso lwenguqulelo yesibini yoColo lwantlandlolo kwaye ngayo uninzi lwethu lwenza ikopi kunye nokuncamathisela ixesha elide, kodwa kule mihla asiboni kuyimfuneko ngenxa yenkqubela phambili ye-Apple OS. phambili Esi sicelo sinexabiso namhlanje nge-16,99 euro, Nangona kuyinyani ukuba ibonelela ngeendlela esingenakho ukuzifumana ngaphandle kwayo, njengokuhlela ukuba umxholo okhutshelweyo sisicatshulwa, imifanekiso, amakhonkco, iifayile okanye naluphi na olunye uhlobo lomxholo, kubonisa ukujonga kwangaphambili oko sikukhuphele okanye ukugcina ngakumbi idatha kwibhodi eqhotyoshwayo, Ngokoluvo lwam, usetyenziso luyasebenziseka ngokupheleleyo, nangona lunokunceda ukuvelisa kulo msebenzi.
Kubasebenzisi abenza lo msebenzi mihla le okanye abafuna ibhonasi xa isiza gcina umxholo ongaphezulu kwibhodi eqhotyoshwayo Isenokuba ilungile, kodwa ayisiyiyo app ebalulekileyo. Ngayiphi na imeko, sishiya ikhonkco lokukhuphela kwabo bafuna ukulisebenzisa kwi-Mac yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Indlela yokukhuphela kunye nokuncamathisela kwi-Mac